कोरोना कहर : मर्कामा मिर्गौलापीडित फिचर . स्वास्थ्य१५ चैत २०७६
पुष्प व्यवसायमा चम्किएको परिवार, वार्षिक १ करोडको कारोबार उनले फूल देख्दा आनन्द र राम्रो लागे पनि फूलको व्यापार चुनौतीपूर्ण भएको ठान्छन् । ‘कसैले सानो दाग लागेको देखे भने लैजाँदैन, चाडपर्वहरूमा लक्षित गरेर ठीक समयमा तयार गनुपर्छ । यदि फूल तयार हुँदा केही दिन तलमाथि भएमा पनि व्यापार हुन सक्दैन’, उनले भने फिचर . उद्योग८ चैत २०७६
पुष्कर लोहनी : मूर्तिभञ्जनको पर्याय पुष्कर लोहनीको साहित्यको विषय ‘यौन’ तथा उनको निजी जीवन र आचरणमा कति फरक छ भन्ने कुरा उनलाई निकटबाट हेर्नेहरूलाई मात्र थाहा छ । टाढाबाट हेर्नेहरूले उनलाई त्यही रूपमा मात्र हेर्छन्, जुन रूपमा कुनै एक दैनिक पत्रिकाले २०६८ सालमा धेरै पृष्ठ बेच्ने प्रलोभनमा ‘पुरुष वेश्या’को संज्ञा दिने दुस्साहस गर्‍यो फिचर . कला / साहित्य१ चैत २०७६
सीप सिकाउने मञ्जुका हात पेसा छनोटसम्बन्धी समाजमा विद्यमान परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्कँदै डडेल्धुराका महिलाहरूले अहिले सिलाइ कटाइलाई आकर्षक पेसा बनाएका छन् । थोरै लगानीमा गुजारा चल्ने आम्दानी हुन थालेपछि महिलाहरू सिलाइ कटाइ व्यवसायतर्फ उन्मुख भएका हुन् फिचर१ चैत २०७६
जहाँ मारिँदैनन् पशु-पन्छी, खाइँदैन मदिरा र सुर्ती एउटा व्यक्ति शाकाहारी हुन सक्छ, एउटा परिवार शाकाहारी पनि छ तर सिंगो गाउँ नै शाकाहारी भनेको सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । विविधताले भरिएको हाम्रो देशमा यस्तो पनि छ । नजरपुर पूरै ‘शाकाहारी वस्ती’ हो फिचर१ चैत २०७६
उपेक्षाबाट खारेज, स्थानीयले खुलाएको रात्रि विद्यालय बुटवल– ५ मा रहेको यस विद्यालयमा दिवा र रात्रि कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । हाल रात्रि विद्यालयमा १ सय १७ जना विद्यार्थी रहेका छन् । कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्यापन हुने यस विद्यालयमा ५ जना माध्यमिक तहका दरबन्दीहरू, ४ जना निमावि तहका दरबन्दी र १–१ जना लेखापाल र कार्यालय सहायक रहेका छन् फिचर . शिक्षा१ चैत २०७६
यसरी मनाइन्छ विश्वमा होली होलीमा रङ र अवीर एकआपसमा छ्याप्ने गरिए पनि पछिल्लो समयमा पानीकै बढी प्रयोग हुने गरेको छ । होलीका बेला भाङको लड्डु, घोट्टालगायत खाएर रमाइलो गर्ने चलन छ । पहिले हिन्दु धर्मका अनुयायीले मात्र मनाउने भए पनि पछिल्लो समय हरेक धर्म, जात र सम्प्रदायले होली मनाउने गरेका छन् फिचर . समाचार२६ फागुन २०७६
आमाको अक्षरमोह (भिडियाे रिपाेर्टसहित) कसैले पनि उनलाई यो उमेरमा किन पढ्नुपर्‍यो भनेर निरुत्साहित गरेका छैनन् । आफन्तहरूले पढ्नका लागि निरन्तर प्रेरणा प्रदान गर्ने गरेका अनुभव छन् उनीसित । आफन्तहरूको हौसला र प्रशंंसाले उनलाई थप बल मिलेको छ फिचर२४ फागुन २०७६
निःशुल्क नि यै मलाई पोषिलो नि यै २० वर्ष अगाडि उक्त अस्पतालमा रोगीहरूलाई निःशुल्क भोजन दिइने गरिन्थ्यो तर अस्पतालमा भोजन बनाउन कुनै मेस सञ्चालकले मानिरहेका थिएनन् । त्यस कारण केही वर्षदेखि भोजन कार्यक्रम बन्द रहेको थियो । निःशुल्क भोजनका लागि आउने ३ लाख रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुने गर्थ्यो फिचर . स्वास्थ्य२४ फागुन २०७६